March 14, 2021 2060
काठमाडौँ । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने मानिसले भ्यास्लिन आफ्नो शरीरलाई नरम र चिल्लो बनाउनको लागी जाडोमा लगाउने गर्दछन्।यस्तो अवस्थामा तपाईको मनमा लाग्यो होला कि आखीर भ्यासलीन कसरी कपालमा लगाउन सकिन्छ त ? आज हामी तपाईलाई भ्यास्लिनको प्रयोगको बारेमा बताउने छौँ।
जसलाई जानेर र यसको परिवर्तन देखेर तपाई छक्क पर्नुहुनेछ। आजको दौडधुपको समयमा कसैको साथमा पनि त्यति समय हुँदैन जसले आफ्नो कपालमा र स्किनमा ध्यान दिन सक्दैनौँ।जसको कारणले हाम्रो कपाल सुख्खा,हाँगा पलाउने,ज्यादा झर्ने हुन्छ। आज हामी तपाईलाई बताउने छौ कि यो उपाय अपनाउनाले तपाईको यी समस्याहरु हराएर जानेछ।
यसकारणले हुन्छ कपालमा समस्या:
कपालको समस्याबाट मुक्ति पाउनुभन्दा पहिले किन आउँछ त कपालमा समस्या भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक छ।सामान्य रुपमा कपालमा आउने समस्या केवल गलत खानपान, अनियमित लाइफस्टाइल र प्रदुषणको कारणले हुने गर्दछ। धेरैजसो मानिस यस कपालको समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागी छिटो तरिका विधी अपनाउने गर्दछन्।त्यसैले कपालसँग जोडिएको केमिकलयुक्त प्रोडक्ट प्रयोग गर्नपनि पछि पर्दैनन्। धेरैजसो मानिस आफ्नो कपाललाई सुन्दर, मस्याइलो बनाउको लागी बजारका प्रोडक्टको प्रयोग गर्छन् भन्ने नै हो भने बजारका प्रोडक्टमा केमिकलको मसावट हुन्छ जसले पछि अनेकौँ समस्या उत्पन्न गराउँछ।
तपाइृको स्किनलाई सुन्दर र मुलायम बनाउनेभ्यास्लिनलाई तपाई अब कपाललाई सुन्दर बनाउनको लागी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।कपालमा भ्यास्लिन लगाउनुको धेरै फाइदा छन्। जसले न त मात्र तपाईको कपालको समस्यालाई मात्र छुटकारा दिन्छ यसले तपाईको कपाललाई सुन्दर र चमकदार पनि बनाउँछ।
कसरी गर्ने त कपालमा भ्यास्लिनको प्रयोग ?
सबैभन्दा पहिला तपाईले यो जान्न जरुरी हुन्छ कि भ्यास्लिनको प्रयोग तपाईले आफ्नो कपालमा गर्दा यसले तपाईको कपाललाई मुलायम बनाउनुको साथै बाक्लो र कालो पनि बनाउँदछ।तपाई सोचिरहनु भएको छ भने हामी तपाईलाई बताउँछौ कि तपाईको कपालमा हाँगा पलाउनुको मुख्यकारण हो कपाल सुख्खा हुनु तर यदि तपाईले कपलमा भ्यासलिन लगाउनुभयो भने यसले तपाईको कपाललाई सरख्खा हुन दिँदैन र यसले हाँगा पलाउने समस्यालाई पनि चैट गराउँदछ। भ्यासलिनले तपाईको कपाललाई सफ्ट र सिल्की बनाउँदछ।
पुरै रात यसलाई यत्तिकै छोड्दिनुहोस्। र बिहान उठेर नुहाउने समयमा कपाललाई स्याम्पु लगाएर धुनुहोस्।यस्तो मात्र १ हप्तासम्म गर्नुहोस्। तपाँई आफैले फरक देख्नपाउनुहुनेछ। सुन्दर र लामो कपालको लागी मनपरेमा जरुर लगाउने कोशीश गर्नुहोला तपाईको कपाल सुन्दर हुनेछ।
Nextयी ४ राशिका मानिससँग हुन्छ निकै अद्भुत शक्ति